Kubvumira muverengi kutaura. Kubva paWordpress kuenda kuna Jekyll 7 | Linux Vakapindwa muropa
Kubvumira muverengi kutaura. Kubva paWordPress kuenda kuJekyll 7
Diego ChiGerman Gonzalez | | General, Zvirongwa, Free Software, Linux software
Rimwe rematambudziko e siya WordPress kuchinjira kuna Jekyll de nzira ipi yekuita zvinhu zvakaitwa neWordPress ne database, asi pasina kushandisa dhatabhesi kana plugins. Tichaona izvi mumaparamende anosara kuti apedzwe muiyo config.yml faira reMinimal Ministakes theme.
Mazuva ayo mapeji ewebhu aive emukati zvemukati akapera kare. Iyo blog inoda kupa vaverengi neimwe mhando yekudyidzana muchimiro chemashoko.. Kuti tipe makomendi isu tinofanirwa kufambisa nzira yekuwana zvirimo zvinovakoka kuti vaite kudaro, uye, hatifanire kukanganwa kuti kana tikakwanisa kuwana zvinyorwa zvedu kuti zvigovane navo, isu tinokwanisa kuwana vaverengi vatsva.
Kuti tiite izvi tinofanirwa kushandira kune zvekunze masevhisi. Minimal Mistakes yakagadzirira kushandisa mamwe eanonyanya kufarirwa aine mashoma ekugadzirisa.
1 Kubvumira muverengi kutaura
1.6 Mimwe mhinduro
Kubvumira muverengi kutaura
Tiri kusiya parutivi chinhu chinonzi Breadcrum icho kunyange hazvo chichiita senge chinobatsira kufambisa mushandisi kufamba, ichiri muchikamu chekuyedza.
Nezve zvakataurwa, Tinogona kusarudza zvinotevera:
Kugonesa makomendi tinofanira kuenda kuchikamu Zvisizvo iri muchikamu chekupedzisira chefaira ratiri kugadzirisa uye pasi pechikamu Values shanduko
mashoko a ichokwadi.
Chimwe chezvinhu chakandikurudzira kuti ndisiye WordPress ndiyo huwandu hwe spam yainokwezva. Kunyangwe iyo pre-yakaiswa plugin yakanaka zvakakwana, iwe uchiri kufanira kubvisa iwo akaenzanisirwa makomendi neruoko.
Disqus inogadzirisa iri dambudziko nekukubvumidza iwe kumisikidza moderation pre-kutonga. Zvakare, makomendi haatore nzvimbo pane yako server. Iwe zvakare haudi dhatabhesi uye vashandisi vanogona kunyoresa nemaakaundi enhau enhau.
Iyo sevhisi inoda kunyoreswa, asi chirongwa chemahara chakaringana kublog rimwe chete.
Kusarudza Discus semupi mupeji reVanopa (Pazasi pemashoko_per_minute)
Kana isu tikasainira Disqus isu tinogadzira ma alias, isu tinoiisa mune makotesheni mushure
Hurukuro, inopfuura yekutaura system, inzvimbo yekukurukurirana. Kuti uishandise mahara unofanirwa kuiisa pane serverr. Iyo michina yekuishandisa pamwe neyako blog yakawedzera kana kushoma yakafanana, chete izvo
Inoenda kukero yevhavha pane chikuva.
Haisi sarudzo yandinokurudzira sezvo ichingobvumira vashandisi kuti vataure neaka Facebook account. Kuti uishandise unofanirwa kuzadza fomu peji ino.
Iyi fomu inokugadzira kodhi iwe. Tarisa uone chikamu chakaratidzirwa mumufananidzo.
Iye zvino tapedza
Rangarira kubvisa kuverenga kuti usarudze iyo sarudzo.
Iyi plugin te inobvumidza iwe kushandisa iyo bug inoshuma chikamu cheako GitHub account senzvimbo yekupindura. Kuramba kwakafanana neFacebook. Inomanikidza vashandisi kuti vave neakaundi papuratifomu.
Iwe unofanirwa kuisa zvirevo paGitHub yako uye nekugadzirisa config.yml nekuita zvinotevera shanduko.
Es zvakanyanya kupfuura sevhisi yekupa mhinduro uye inogona zvakare kushandiswa kugadzira ongororo kana ongororo yezvigadzirwa. Iyo yemahara uye yakavhurwa sosi, asi iwe unoda server kuti uigamuchire.
Nezve mashandisiro ayo emashoko, inokutendera kuti ugamuchire zviyeuchidzo uye uone spam.
Iyo Minimal Mistakes bhuku harina kukwana zvakakwana kuti ritsanangure pamusoro pekugadziriswa kwayo saka ini ndine chikwereti kwauri kune rinotevera.
Kuti tishandise mimwe mhinduro tinofanirwa kuisa
uye mune dhairekita inonzi _includes (Isu tinogadzira iyo kana isipo) isu tinotsvaga (kana kugadzira) imwe inonzi macomments_provider uye ipapo pane peji rakanzi custom.html isu tinamatira iyo yekupinda kodhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Kubvumira muverengi kutaura. Kubva paWordPress kuenda kuJekyll 7